Indlu entle yasefama - I-Airbnb
Indlu entle yasefama
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguLiisa
Sirenta indlu enkulu yasefama enegadi ngaphandle nje kwedolophu entle yaseKristinankaupunki.
Indawo ilungile kwiholide zasehlotyeni ngokuloba, iziqithi, indalo, i-sauna, ukuqubha kunye neenkuni ezigcwele amaqunube.
Ndiqesha indlu yasefama yootatomkhulu kum kumgama wokuhamba ukuya edolophini (500 m) enendawo yomlilo esetyenziswa ngokupheleleyo kuwo onke amagumbi.
Kukho igadi entle eneentyantyambo ezininzi, amaqunube nemifuno, onokuyonwabela.
4.72 · Izimvo eziyi-105
I-Kristinankaupunki yidolophu encinci yolwandle ene-archipelago, izindlu ezindala zamaplanga kunye neekhefi ezininzi kunye nemisebenzi yasehlotyeni, efana neemarike zentakumba kunye neegadi ezivulekileyo. Ibala lebhola ekhatywayo, igalufa yefrisbee kunye nengcwaba elihle lakudala ngabamelwane bethu. Umzila wendalo uqala ngaphandle nje kwegadi yethu. Eminye imisebenzi iquka ukuhamba ngesikhephe, ukuloba, ukuqubha, ukukha amaqunube afana namaqunube namaqunube, namakhowa. I-Kristinankaupunki yidolophu yokuqala kunye nekuphela kwedolophu yaseCittaslow eFinland!
Le yibhlog evela kwenye yeendwendwe zethu (ehlotyeni, ngo-2015):
Umbuki zindwendwe ngu- Liisa
Ndihlala kwindlu encinci ecaleni kwendlu yasefama.
Ndiza kukunceda kangangoko ufuna. Ukuba unomdla kwindalo yendawo, ndingakuxelela yonke into malunga nayo kwaye ndisebenze njengezikhokelo, ukuba uyafuna. Ndithetha isiFinnish, isiSwedish kunye nesiNgesi. Kwaye kancinci Hindi.
Ndiza kukunceda kangangoko ufuna. Ukuba unomdla kwindalo yendawo, ndingakuxelela yonke into malunga nayo kwaye ndisebenze nj…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Itäpuoli